ဖလားတွေ တောက်လျောက်ယူနေတဲ့ ချဲလ်ဆီး ကို လီဗာပူး တားဆီးနိုင်မလားဆိုတာ ခန့်မှန်းသုံးသပ်လိုက်တဲ့ ပေါလ် မာဆွန် - xyznews.co
ဖလားတွေ တောက်လျောက်ယူနေတဲ့ ချဲလ်ဆီး ကို လီဗာပူး တားဆီးနိုင်မလားဆိုတာ ခန့်မှန်းသုံးသပ်လိုက်တဲ့ ပေါလ် မာဆွန်
အင်္ဂလန် ပြည်တွင်း ဖလား တခုဖြစ်တဲ့ ခါရာဘောင် ဖလား ရဲ့ ဗိုလ်လုပွဲကတော့ ရောက်ရှိလို့ လာခဲ့ပါပြီ ။ ဒီနှစ် မှာတော့ ၄ နှစ်ဆက် ချန်ပီယံ မန်စီးတီး တို့ ကွာတားဖိုင်နယ် မှာ ကျန်ရစ် ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲ သက်တမ်း တလျောက် အအောင်မြင်ဆုံး အသင်း ဖြစ်တဲ့ လီဗာပူး နဲ့ မနှစ်ကတည်းက ဖလားတွေ တောက်လျောက် ယူနေတဲ့ ချဲလ်ဆီး တို့ ဝင်ဘာလေ က အဆုံးအဖြတ်ပွဲ ကို တက်ရောက် လာနိုင်ခဲ့ ကြပါတယ် ။
သူတို့ ဟာ ဒီနှစ် ပြည်တွင်းမှာ နှစ်ကျော့စလုံး ဆုံထားပြီး နှစ်ကြိမ်စလုံးမှာ သရေရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ် ထားခဲ့ပါတယ် ။
အကယ်၍ ဒီပွဲမှာ လီဗာပူး တို့ ဗိုလ်စွဲခဲ့မယ် ဆိုရင် မနှစ်က ဖိုင်နယ် အပြီးမှာ အမီလိုက်လာတဲ့ မန်စီးတီး ကို ဖလား ၁ ကြိမ် အသာပြန်ယူပြီး ချန်ပီယံ ၉ ကြိမ်နဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး အသင်းအဖြစ် တဦးပိုင် ပြန်လည် ရပ်တည် နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ရခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ချန်ပီယံလိဂ် ၊ ဥရောပ စူပါဖလား ၊ ကလပ် ကမ္ဘာ့ဖလား တွေမှာ ဆက်တိုက် ရရှိထားတဲ့ အောင်မြင်မှုကို ထပ်တိုး နိုင်မှာပါ ။
ဒါကြောင့် မနက်ဖြန်ညမှာ ကစးမယ့် ချဲလ်ဆီး နဲ့ လီဗာပူး တို့ရဲ့ ခါရာဘောင် ဖလား ဗိုလ်လုပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပေါလ် မာဆွန် ရဲ့ ခန့်မှန်း သုံးသပ်ချက် ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ရ ပါတယ် ။
“သူတို့ ၂ သင်းရဲ့ ဒီရာသီ ဖြတ်သန်းလာတဲ့ ခြေစွမ်း နဲ့ ပုံစံကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီပွဲဟာ ဂိုးတွေများများ သွင်းနိုင်မယ့် ပွဲလို့ ပြောရမှာပါ ။ လက်ရှိ မှာ ချဲလ်ဆီး ခံစစ်က ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် လီဗာပူး ရဲ့ တိုက်စစ်ကလည်း တကယ့်ကို အကောင်းဆုံး အနေအထားမှာ ဖြစ်နေပါတယ် ။
အခုချိန်မှာ လီဗာပူး တိုက်စစ်ကို ဂိုးမပေးရအောင် တားဆီးနိုင်မယ့် ခံစစ်မရှိသလောက် ပါပဲ”
“လူကာကူ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒွိဟ ဖြစ်စရာတွေ ရှိနေပေမယ့် အခုပွဲမှာ လီဗာပူး ခံစစ်ကို ထိုးဖောက်ပြီး ဂိုးသွင်းဖို့ ချဲလ်ဆီးမှာ လုံလောက်တဲ့ စွမ်းအားတွေ ရှိနေမယ်လို့လည်း ကျွန်တော် ယုံကြည်ထား ပါတယ် ။
စတမ်းဖိုဒ့် ဘရစ်မှာ ကစားသွားတဲ့ ပွဲကိုပဲ ကြည့်ပါ ၊ လီဗာပူး က ၂-၀ နဲ့ ဦးဆောင်နေပေမယ့် ချဲလ်ဆီး တို့ ပြန်ချေပ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ချန်ပီယံ တသင်း ပီပီ ချန်ပီယံတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ် ကို သူတို့ ပိုင်ဆိုင် ထားတာပါ ။ ဒီလို အချိန်မှာ သူတို့က ဖြိုလှဲရခက်မှာ အမှန်ပါပဲ”
“ဒီတော့ ကျွန်တော် ဘာပြောရမလဲ ၊ တကယ်ကို ထူးချွန်တဲ့ နည်းပြ တယောက်စီ ရှိနေတဲ့ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး အသင်း ၂ သင်း ရင်ဆိုင်ကြတဲ့ ပွဲမှာ ဘယ်သူက ဗိုလ်စွဲပြီး ချန်ပီယံ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ပြတ်သားတဲ့ အားသာမှုမျိုး ကို ကျွန်တော် ရှာလို့ မတွေ့နိုင် ပါဘူး ။
ချဲလ်ဆီးက ခံစစ်ပိုကောင်းတယ် ၊ ကွင်းလယ်မှာလည်း လီဗာပူး ထက် ပိုသာပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လီဗာပူး က တိုက်စစ်ပိုင်း ပိုသားပြီး ထိုးဖောက်ခွင့်တွေ ရလေလေ ပိုကောင်းလာ လေလေပါပဲ ။
သောမတ်စ် တူချယ် အနေနဲ့ ဒီအတွက် အဖြေထုတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်”
“ဘယ်သူ ချန်ပီယံ ဖြစ်မလဲဆိုတာထက် ဒီပွဲမှာ ဘယ်သူ ရှုံးနိမ့်မလဲဆိုတာကို ကျွန်တော် ပိုပြီး သိချင်မိ ပါတယ် ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ဘယ်သူပဲ ဒုတိယ ဆုရရ မထိုက်တန်လို့ ပါပဲ ။
မိနစ် ၉၀ မှာ အဖြေပေါ်ဖို့ ဆိုတာ တော်တော်လေး ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပါးပါတယ် ။ ကျွန်တော် ပြောနိုင်တာ တခုကတော့ ဂိုးများနိုင်မယ် ဆိုတာပါပဲ” လို့ ပေါလ်မာဆွန် က သုံးသပ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မာဆင် က ၂ ဂိုးစီ သရေကျနိုင်ပြီး ပင်နယ်တီ အထိ ရောက်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ထားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ချန်ပီယံ အသင်းကိုတော့ မရွေးချယ်ခဲ့ ပါဘူး ။
SM ပရိသတ်ကြီး တို့ကရော ဘယ်သူအသင်းက ချန်ပီယံ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်သလဲဗျာ . . .
Previous Article လိဂ်ဖလားဖိုင်နယ်မှာ တွေ့ဆုံမယ့် ချဲလ်ဆီး နဲ့ လီဗာပူး အသင်းသားတွေ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အကောင်းဆုံး အသင်းကို ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ဂလင်းဂျွန်ဆင်
Next Article ကွင်းထဲမှာ ပြန်မြင်ရတော့မယ့် အဲရစ်ဆင် ၊ စပါးကနေ မထွက်ဘူးလို့ ပြောတဲ့ ကွန်တီ ၊ PSG ရဲ့ စာချုပ်သစ်ကို ထပ်ပြီး ပယ်ချတဲ့ ဘာပေ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ